Iifowuni ze-Android - i-Androidsis | I-Androidsis
Ngaba ujonge indlela yokusebenzisa ngcono ifowuni yakho ye-Android okanye usetyenziso? Kwinqanaba lamaqhinga e-Android uya kufumana elona nani likhulu lamaqhinga eliya kutshintsha indlela oyisebenzisa ngayo ifowuni yakho okanye usetyenziso olwenzileyo kuyo. Enkosi kubo, uya kufumana okuninzi kwifowuni yakho okanye kwizicelo.
Amaqhinga alula, kuzo zonke iintlobo zabasebenzisi be-Android, eya kukuvumela ukuba uyonwabele ngakumbi ifowuni yakho okanye uyinikeze imisebenzi emitsha obungayazi kude kube ngoku. Ukulungele ukonwabela i-smartphone yakho? Emva koko ungaphoswa nanye ala maqhinga.
Iselula yam iyazicima yodwa: 7 izisombululo ezinokwenzeka
Ukuba iselfowuni iyazicima yodwa kwaye ngaphandle kwesaziso kwangaphambili, nokuba uyisebenzisa okanye xa i...
Uyivula njani ifowuni ye-Android ngesikrini esaphukileyo
Ukuba isikrini sakho esiphathwayo saphukile kwaye awukwazi ukusivula ukwenza i-backup...
Uyiqhagamshela njani ifowuni yakho kwiPC ngeWi-Fi
Kubasebenzisi abaninzi, iselfowuni kuphela kwesixhobo sabo sokunxibelelana nge-intanethi kwaye, ngamaxesha ambalwa kakhulu, abafane babe…
Isisombululo ukuba awukwazi ukuthatha iminxeba engenayo
Okwangoku, akunakwenzeka ukuba isikrini esichukumisayo siyeke ukusebenza. Xa iselula yethu ingasivumeli...
Iminxeba engenayo ayikhali kwiselfowuni yam: izisombululo ezinokwenzeka
por UAron Rivas yenzayo Iinyanga ze5 .
Esinye sezizathu eziphambili zokuba sithenge nayiphi na ifowuni ephathwayo kukufumana iminxeba. Ngoko ke kubalulekile...
Iiapps ezilungileyo zokuthatha ifoto yepaspoti
por UMiguel Hernandez yenzayo Iinyanga ze6 .
Iifoto kubungakanani bepaspoti okanye ifomathi zibaluleke kakhulu kwimihla yethu, zisetyenziselwa amakhadi ethu oshishino ...
Uyibona njani ibhetri yee-AirPods kwi-Android
por UEder Ferreno yenzayo Iinyanga ze7 .
Ii-Apple AirPods zii-headphones ezingenazingcingo ezidume kakhulu kwintengiso. Kananjalo abasebenzisi abaninzi kwi...
Uyenza njani imali kwiTikTok: ezona ndlela zibalaseleyo
I-TikTok sesinye sezona zicelo zidumileyo namhlanje, ngakumbi phakathi kwabantu abancinci. Eli ikwaliqonga apho...
Uyibeka njani i-NFC kwiselula engenayo
Xa uthenga iselfowuni entsha, kufuneka sithathele ingqalelo, ukongeza kwiimfuno onokuthi ube nazo ...
Worder: Ungayisebenzisa njani ukuphumelela eAppalabrados
Kanye njengochungechunge loMdlalo weNetflix squid alusekelwanga kuluvo lwangaphambili, oludumileyo ...
Uyiguqula njani ifoto ibe yiPDF kwi-Android
Ifowuni yethu ye-Android sisixhobo esisinika imisebenzi emininzi eyahlukeneyo, enkosi apho sinokufumana khona ...
Esona sicelo silungileyo sokukhuphela iividiyo ezivela kuYouTube, Facebook, Instagram ...
Awona maqhinga aphezulu kwi-OnePlus 5T
Ungcono kuneNetflix kwaye ukhululeke ngokupheleleyo !!. I-Plusdede iyafumaneka kwiVenkile yeGoogle Play
Bona amajelo ahlawulelwayo simahla
Uluhlu lwee-Wiseplay, eyona ndawo ifanelekileyo yokukhuphela kunye nendlela yokuzifaka ngokuchanekileyo
I-MOBDRO ye-Android, jonga amajelo ahlawulelwayo simahla